Tag Archive for "ओली र प्रचण्ड" - नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित, दुई अध्यक्षबीच गृहकार्यको खाँचो !
नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित, दुई अध्यक्षबीच गृहकार्यको खाँचो !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा'को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पार्टी एकता र आन्तरिक विवाद समाधानका लागि भन्दै सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच थप गृहकार्यको खाँचो रहेकाले बैठक स्थगित भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । नेकपा भित्र केही दिनयता शीर्ष दुई नेता ओली र प्रचण्डबीच नै एकम... थप पढ्नुहोस्
सरकार गठनको विषयमा ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
१२ पुस, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज ओली निवास बालकोटमा डेढ घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ । सरकार गठन र पार्टी एकताबारे बाहिर गलत हल्ला चलेपछि आज दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा पार्टी एकता, नयाँ सरकार निर्माण र राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिक... थप पढ्नुहोस्